मतगणना सुरु, कुन दलले कति सिट जित्लान ? यस्तो छ हिसाव - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मतगणना सुरु, कुन दलले कति सिट जित्लान ? यस्तो छ हिसाव
काठमाडौं । चुनाव सकिएसँगै मतगणना हुँदैछ । मंसिर १० गते पहिलो चरणमा चुनाव भएका ३२ जिल्लामा साँझ ६ बजेसम्ममा मतगणना सुरु गरिसक्ने तयारी छ । मतदान सकिएको ११ दिनपछि मतगणना गर्न मुचुल्काको काम ५ बजेसम्म सकिएको छ । त्यसैले ४५ जिल्लामा आज मतदान सकिएलगत्तै ३२ जिल्लाको मतगणना सुरु गर्न लागिएको हो । दोस्रो चरणमा भएको मतदानको गणना पनि रातीबाट नै सुरु गर्ने तयारी छ । पहिलो चरणमा मतदान भएका केही जिल्लाहरुमा सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना शुरु गर्ने तयारी गरिसकेका छन् ।
प्रदेश नम्बर एकका ७ म्धये ६ वटा जिल्लाका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा चुनाव भएका ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा मंसीर १० गते भएको मतदानको मतगणना भर्खरै सुरु भएको छ । खोटाङमा भने सातबजेपछि मात्रै मत गणना सुरु हुने भएको छ ।
प्रदेश नम्वर ३ का १३ जिल्लामध्ये पहिलो चरणमा चुनाव भएका ६ जिल्लामध्ये तीन जिल्लामा बेलुका ५ बजेदेखि मतगणना शुरु भएको छ । रसुवा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र धादिङगमा मत गणना सुरु भएको छ भने नुवाकोटमा २ घण्टापछि ७ बजेदेखि मत गणना गर्ने तयारी छ । दोलखामा भने मत गणना सुरु गर्ने नगर्नेमा छलफल नै चलिरहेको छ ।
मतगणना सुरु गर्ने तयारीसँगै दलहरुले चुनावी नतिजाको लेखा जोखा पनि सुरु गरेका छन् । एमाले–नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस तथा कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन दुवैले संघीय नेपालको पहिलो प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् । ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी क्न्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३२ जिल्लाको समीक्षा गर्दा दुई तिहाइ बढी सिट जित्ने आँकलन यसअघि गरिसकेका छन् । दोस्रोका लागि शुक्रबार छलफल गर्नेछन् ।
– फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले प्रदेश २ मा दुई तिहाइभन्दा बढी सिट जितेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने निश्चित भएको बताए । राजपा नेपालका महासचिव अजय गुप्ताले मधेसवादी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभातर्फ ५० भन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गरेका छन् ।